सिन्धु घाँटीको सभ्यता - विकिपिडिया
यस लेखलाई सिन्धु घाटीको सभ्यतामा गाभ्नको लागि सुझाव दिइएको छ। (वार्तालाप) मे २०२० देखि प्रस्तावित।
सिन्धघाटी सभ्यताको प्रारम्भ ३००० ई. पू. मा भएको थियो । यस सभ्यताको मुख्य केन्द्र हालको पाकिस्तानको हडप्पा र मोहोनजोदडोमा पर्दछ । यी दुवै ठाउँ एकअर्कोबाट ४०० माइल टाढा रहेका छन् ।
सिन्धघाटी सभ्यताको मुख्य विशेषता भवन निर्माण तथा नहर योजना थियो । यहाँ बनेका घर प्रायः पाकेका इँटाले बनेका हुन्थे । घर बनाउँदा ढुंगाको प्रयोग गरेको पाइँदैन । प्रत्येक घरमा सुत्ने कोठा, बैठक कोठा, भान्सा र स्नानगृह छुट्टाछुट्टै बनेका हुन्थे । नगरका सडकहरु फराकिला थिए । सिन्धघाटीको एउटा स्नानगृह १८०×१०८ फिट चौडा थियो । यसैसँग जोडिएको पौडी खेल्ने पोखरी पनि थियो । मोहन्जोदडोमा खाद्य भण्डार र सभागृह पनि बनेको थियो ।
सिन्धघाटीका मानिसहरु फलफूल, माछामासु, तरकारी र दूध खाने गर्दथे । यिनीहरु नाइटोदेखि मुनि मात्र लुगा लगाउँथे । पुरुषहरु कुममा च्यादर राख्थे । महिलाहरू विभिन्न किसिमका श्रृंगारका साधनहरु प्रयोग गर्दथे । धनीहरु आप्mनो सुख सुविधाका निम्ति दासदासी राख्ने गर्दथे ।
सिन्धवासीहरूको व्यवसाय कृषि, व्यापार र उद्योग थियो । यिनीहरु खेतीपातीका साथै पशुपालन पनि गर्दथे । यिनीहरूलाई घोडाको ज्ञान थिएन । सामानहरु वैलगाडामा ढुवानी गर्दथे । यिनीहरूलाई तामा, काँच, टिन र चाँदीको प्रयोग गर्ने तरीका राम्ररी थाहा थियो । यिनीहरु नापतौल गर्न पनि जान्दथे । यिनीहरु निर्यात गरिने वस्तुमा छाप लगाउँथे ।
सिन्धवासीहरु मातृका र शिवको पूजा गर्दथे । यसबाहेक यिनीहरु सर्प, परेवा, बाख्रा, गोरु, गैडा र गोहीको पूजा गर्दथे ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=सिन्धु_घाँटीको_सभ्यता&oldid=905403" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ३ सेप्टेम्बर २०२०, १२:५९
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १२:५९, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।